> Resource > Ladnaansho > Siduu u External Hard Drive Recovery ah Barzakh,
Waxaan soo kaban karto, Xogta laga Barzakh masaxay on External Hard Drive?
Waxaan haystaa laba maqaal qoruhu on my drive dibadda adag oo saaka waxaan si qalad ah la tirtiro mid Risaalo oo dhan ka. Hadda waxaan uun ka heli karaan xijaab kale. Waxaan leenahay badan oo sawiro muhiim ah, videos iyo waraaqaha on Risaalo ka tirtiray. Ma jiraa hab ah in aan dib ugu heli karaan faylasha ii?
Isdeji. Faylal ay ku hadlo xijaab tirtiray weli la soo kabsaday kartaa drive dibadda adag inta ay tahay in aan la overwritten by xog cusub oo ku saabsan drive ka. Ka hor aad eegto si ay u heli Risaalo ka dib, aad si fiican u soo kaban lahaa xog ku saabsan Risaalo ka lumay. Maxaa yeelay, tallaabo kasta oo ku saabsan baabuur dibadda adag suurto gal overwrites kartaan files kuwa.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah ugu wanaagsan ee barnaamijyada adag dibadda xijaab drive soo kabashada aad ka heli karto internet ka. Qalabkani waxa uu awood badan waa awoodaa inuu ka soo kabsado ku dhowaad dhammaan xogta laga hadlo xijaab badiyay drive dibadda adag oo aan khasaaro. Waxaa soo kabanayo dhammaan noocyada kala duwan ee noocyada file fudayd, oo ay ku jiraan sawirrada, files audio, videos, waraaqaha iyo in ka badan.
Waxaad hadda karaa download version maxkamad barnaamijka a. Fadlan kala soo bixi version saxda ah ee computer.
Fiiro gaar ah: Wondershare Data Recovery waa barnaamij ku caawiya in aad ka bogsato xogta laga hadlo xijaab badiyay aad drive dibadda adag.
3 Talaabada si loo farsameeyo External Hard Drive Recovery ah Barzakh,
Fiiro gaar ah: Windows iyo Mac Labada versions of Wondershare Data Recovery leeyihiin howlgallada la midka ah. Halkan waxaan ku tusi doonaa sida inuu ka soo kabsado xogta laga hadlo xijaab tirtiray on drive adag dibadda ah oo Windows version waxaa ka mid ah.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah si ay u bilaabaan soo kabashada xijaab drive adag dibadda
Fadlan xiriiriyaan drive dibadda adag on your computer, oo kadibna aan biloowno barnaamij Wondershare Data Recovery.
Waxaad arki doonaa suuqa kala ah 3 hababka soo kabashada. Si aad u soo kabsado xijaab tirtiray ka drive dibadda u adag, waxaad dooran kartaa "Recovery ah Barzakh," mode si ay u bilaabaan.
Tallaabada 2 Scan xijaab badiyay aad drive dibadda adag
Marka aad u baahan tahay in ay doortaan aad drive dibadda adag ee suuqa kala barnaamijka oo guji "Next" button.
Markaasaa qoruhu aad drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan Risaalo ka tirtiray oo guji "Start" si ay u bilaabaan baar files waxa on.
Tallaabada 3 Ladnaansho xijaab tirtiray ka drive dibadda adag
Marka iskaanka ay ka badan tahay, dhammaan faylasha laga helay Risaalo ka tirtiray la soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka arki kartaa magacyadooda asalka ah ama sawiro Falanqeynta in lagu hubiyo sida badan faylasha lagu soo kabsaday karaan xijaab tirtiray.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan files aad u baahan tahay in ay dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya on your computer.
Sida loo soo ceshano tirtiray Text Messages (Android & macruufka)
Telefoonka Gacanta Photo Recovery: Ladnaansho Losr ama la tirtiro Photos ka Cell Phone